Mashiinka Adkeynta Mashiinka Adkeynta Qalitaanka Qalitaanka Induction
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhibaatada Induction / Induusha Adkeynta Birta Birta adag
Category: Dhibaatada Induction Tags: iibso mishiinka qallajinta indha-indheynta, adkeyn, biibiile adag, adkaanta birta, dusha adag, Mashiinka qallafsanaanta HF, Dhuumaha adag ee adag, adkaynta induction, Tuubooyinka adkaanta indha-indheynta, adkaanta birta induction, dusha sare ee carbinta
Induction Adkeynta qaybaha biibiile dusha sare
Ujeeddo: Adkeynta adkaynta waxaa loo isticmaalaa geedi socodka si loo adkeeyo qaybta biibiile birta ah si loo hagaajiyo iska caabbinta
Waxyaabaha: Qaybaha biibiilaha birta: 1.6 "(40 mm) dhexroor dibadda ah, 0.125" (3 mm) derbi 2 "(50 mm) dheer
Heerkulka: 1832 ºF (1000 ºC)
Joogtaynta: 88 Khz
Qalabka kuleylka kuleylka: DW-UHF-30 kW, 100kHz nidaamka kuleylka induction, oo ku qalabaysan mashiinka shaqada fog oo ka kooban afar 2.0 2F capacitors wadar ahaan XNUMX μF
- An kululaynta kuleylka induction loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah codsigan si loo daboolo baaxadda siligga
Habka kuleylka kuleylka: Wareeg shan geesle ah oo loo rogo ayaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo shaadhka birta. Fogaanta u dhaxeysa wareegga wareegga ayaa la hagaajiyay si loo siiyo kuleylka isku midka ah qaybta birta. Qaybaha waxaa lagu demiyey 7% polymer damis kadib wareegga kuleylka si loo gaaro adkaanta RC40.
Kuleylka kuleylka Sheeko: Ku hungowday heerar tayo hooseeya oo ah geeddi-socod hore loo sii daayay, macaamilku wuxuu adeegsadaa soo-kicinta si uu u keeno daaweynta kuleylka iyo xakamaynta tayada alaabada dhammaadka guriga.
- si toos ah ugu kululee qaybta, adoo badbaadinaya tamarta iyo waqtiga
- xakamaynta saxda ah ee kululaynta
- xitaa qaybinta kuleylka qaybta
- heerarka wax soosaarka oo dhakhso leh & waxsoosaarka oo kordhay
- hab aan olol lahayn